पब्जीलाइ टक्कर दिन अक्षय कुमार सम्मिलित ’फौजी’ गेम आउँँदै, पब्जीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ? - सिम्रिक खबर
पब्जीलाइ टक्कर दिन अक्षय कुमार सम्मिलित ’फौजी’ गेम आउँँदै, पब्जीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ला ?
काठमाण्डौ । भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारसँगै एक भारतीय कम्पनीले ’पब्जी जस्तो’ मोबाइल गेम बजार सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । जसले प्रख्यात चिनियाँ मोबाइल गेम पब्जीलाइ टक्कर दिने भनिएको छ । भारत र चिन विचको तनावको कारण भारतमा चिनका दर्जनौ एप्लीकेसनहरु प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । जसको कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आत्मनिर्भर अभियान समेत सुरु गरेका छन् ।
बंगलोरमा आधारित एनकोर खेलहरू नामको कम्पनीले यस मोबाइल खेललाई तयार पारेको छ जसले पब्जीलाइ सिधै टक्कर दिने आशा राखिएको छ । उक्त गेमको नाम फौजी हो । जुन अक्टोबरको अन्त्य सम्म बजारमा आउनेछ।
कम्पनीका सहसंस्थापक विशाल गोंडालले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई भनेका छन्, “निडर र युनाइटेड गार्ड्स यस खेलको पूरा नाम हो। यो खेल धेरै महिनादेखि सञ्चालनमा छ। हामीले यस खेलको पहिलो चरण गल्वान भ्यालीमा आधारित छ। “ गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकहरू बीच पहिलो भिडन्त भएको थियो जसमा कम्तिमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यसबेलादेखि दुई देश बीचको सीमा रेखामा तनाव जारी छ। यस गतिरोधको बीचमा भारत सरकारले बुधबार चिनियाँ कम्पनीका लोकप्रिय पब्जी सहितका ११८ मोबाइल एप्स बन्द गरेको छ । पबजी अर्थात् प्लेयर अननोन ब्याटग्राउन्ड्स भारतमा विगत केही बर्षहरूमा धेरै लोकप्रिय मोबाइल खेल हो। युवाहरूलाई यस खेलको लागि पागल नै भएको मानिन्छ र उनीहरूको सामाजिक प्रतिक्रिया पनि यस प्रतिबन्धको विषयमा उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा तिखो प्रतिक्रियाहरु पनि ब्यक्त गरेका छन् ।
कम्पनीका सहसंस्थापक विशाल गोंडालले पनि घोषणा गरेका छन् कि “यस मोबाइल गेमबाट कुल राजस्वको २० प्रतिशत भारतका लागि शहीद भएका सैनिकहरूको परिवारलाई दिइनेछ।“ यस अभियानमा अक्षयकुमारले पनि साथ दिएका छन् । कम्पनीका अनुसार, फौजी अर्थात ’एफएयूः जीको अर्थ सैनिक हो’ भन्ने नाम पनि अक्षय कुमारले सुझाव गरेका थिए। अक्षय कुमारले पनि यस बारे शुक्रबार ट्वीट गरेर जानकारी दिएका छन्। उनले लेखेका छन् “म यो एक्शन गेम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्व महसुस गर्दछु, निडर र संयुक्त गार्ड्स एफएयू–जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई समर्थन गर्दछ। मनोरञ्जन सँगै गेम खेल्नेहरुले हाम्रा सहिद सैनिकहरुको बलिदानका बारेमा जान्नृे छन्। यस खेलबाट प्राप्त हुने रकमको २० प्रतिशत भारतको ’भारत का वीर’ ट्रस्टलाई दान गरिनेछ। “ खेल शुरु भएको केही दिनमै करिब २० करोडले यो गेम डाउनलोड गर्ने आशा राखिएको बीबीसीले लेखेको छ ।